News 18 Nepal || बिल गेट्सले किन चलाउँदैनन् आइफोन ?
एजेन्सी । विश्वमा आइफोन प्रयोगकर्ताको संख्या १ अर्बभन्दा धेरै छ । संसारका सबैजसो हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुले आइफोन चलाउँदछन् । तर माइक्रोसफ्ट कम्पनीका सहसस्थापक बिल गेट्स चाहिँ आइफोन नचलाउने व्यक्तिमध्ये एक हुन् ।
हालैको एक अन्तरवार्ताका क्रममा गेट्सले आफूले आइफोन नचलाउने खुलासा गर्दै आइफोनको साटो एन्ड्रोइड फोन चलाउन मन पराउनुको कारण पनि खुलाएका छन् ।
उनले भने– मैले वास्तवमा एन्ड्रोइड फोन चलाउँछु । किनकी मलाई सबै कुरामा अद्यावधिक हुन मन पर्दछ । मेरो प्रायः खेलाउने फोन आइफोन हुनसक्दछ तर प्रयोगका लागि आफूसँग बोकेर हिँड्नेचाहिँ एन्ड्रोइड फोन हो ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने गेट्सले आइफोन किनेका त छन् तर त्यो उनको दैनिक सञ्चारजन्य प्रयोगमा छैन । उनका अनुसार कतिपय एन्ड्रोइड निर्माताले माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर प्रि–इन्स्टल गर्ने हुनाले पनि उनलाई एन्ड्रोइड फोन अझ सहज बनेको हो प्रयोगका लागि ।
एप्पल अपरेटिंग सिस्टम एन्ड्रोइड जस्तो कस्टमाइजेसनका लागि लचक अपरेटिंग सिस्टम होइन । यस विषयमा बोल्दै गेट्सले अपरेटिंग सिस्टमलाई सफ्टवेयरसँगको जोड्नका लागि एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टम सजिलो भएको बताए ।
यद्यपि आइओएस १४ मा एप्पलले आइफोनलाई यसअघि भन्दा अधिक कस्टमाइजेबल र फ्लेक्सिबल बनाएको छ । साथै एप स्टोरमा माइक्रोसफ्टका एपहरु सजिलैसँग पाइन्छन् भने डिफल्ट ब्राउजर र इमेल क्लाइन्ट पनि सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
नयाँ सोसल मिडिया एप क्लबहाउसलाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा बिल गेट्सले आफ्ना धेरै साथीहरुसँग चाहिँ आइफोन नै रहेको बताए । रोचक त के भने उनले आफूले एन्ड्रोइड फोन चलाउने भनेर अन्तरवार्ता दिएको क्लबहाउस नामक सोसल मिडिया एप हाल आइफोनमा मात्र उपलब्ध छ ।
अहिलेसम्म यो एप एन्ड्रोइडमा उपलब्ध नभए पनि गुगल प्ले स्टोरमा यसलाई ल्याउनका लागि कम्पनीले काम गरिरहेको बताइएको छ ।क्लबहाउस एउटा अडियो च्याट सोसल नेटवर्किंग प्लाटफर्म हो ।
पछिल्ला केही महिनामा यसले व्यापक लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ । टेस्लाका सिइओ एलन मस्कले पनि यो प्लाटफर्मलाई प्रयोग गरिसकेका छन् ।
कुन कुन ठाउँमा छ बाढीको खतरा ? यसरी अनलाइनबाट थाहा पाउनुहोस्